Taliska AMISOM oo xaqiijiyay in degmada Xudur la wareegeen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Taliska AMISOM oo xaqiijiyay in degmada Xudur la wareegeen
Mareeg.com-Taliska Ciidamada AMISOM ayaa xaqiijiyay in gelinkii dambe ee maanta ciidamadooda iyo kuwa dowladda oo is kaashanaya ay la wareegeen degmada Xudur ee xarunta Gobolka Bakool, kadib dagaalo duleedka degmadaas ka dhacayay saacadihii u dambeeyay.
War ka soo baxay AMISOM oo lagu qoray bartooda Twitter-ka ayaa lagu sheegay in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ka socda dalka Itoobiya ay qabsadeen Xudur, xaalada degmadana tahay mid degan.
Inkastoo aanu jirin faah faahin rasmi ah oo ku aadan qasaaraha ka dhashay dagaalada, hadana Al-Shabaab ayaa sheegatay in qaraxyo ay gudaha Xudur kula beegsatay Ciidamada Itoobiya, isla markaana ay qasaare ku gaarsiisay.
Xaalada degmada ayaa caawa degan, waxaana ay ciidamada Itoobiya ay saldhig ka sameysteen gudaha iyo daafaha degmada Xudur, iyadoo xoogagii Al-Shabaab ee ka baxay degmada la sheegay inay aadeen deegaano kale.
Ciidamada Itoobiya ayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan oo xoog leh ka wada qeybo ka mid ah Gobolada Koofurta Soomaaliya oo kumanaan ciidamo soo geliyeen, waxaana maalmaha soo socda qorsheynayaan inay duulaan ku qaadaan deegaanada Shabaabka maamulaan.
Degmada Xudur ayaa sanadkii la soo dhaafay Al-Shabaab dib ula wareegtay, markii ciidamada Itoobiya ay isaga baxeen, waxaana xilligii ay qabsanayeen degmadaas iyo xilligan ay tahay mid kala duwan, maadaama haatan ay ka mid noqdeen howl galka AMISOM.
Madoobe Nuunow oo loo dhaariyey Madaxweynaha Maamul aan aqoonsi helin